Pedri Gonzalez Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Pedri Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Pedri Gonzalez na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Onwe na Net Net.
N’okwu doro anya, anyị na-ewetara gị njem ya, site na mbido ụbọchị, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, lee, ọ bụ nwata ka ọ ga - ama ama ama - nchịkọta zuru oke nke Pedri's Bio.
Akụkọ banyere Pedri.
Ee, gị na gị maara Pedri bu onye ahọrọ, onye ọkpụkpọ nke na - eme ihe ọbụla karịa ige ntị na mmụta site na onye ndu mmụọ ya; Lionel Messi.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu a, anyị ghọtara na ọ bụ mmadụ ole na ole gbagburu akụkọ ndụ ya. Anyị akwadebela gị ya na enweghị mgbatị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Pedri Childhood:
Maka ndị na-ebido Biography, 'Pedri' bụ naanị aha otutu, na aha ya bụ Pedro Gonzalez Lopez. A mụrụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ na 25th nke November 2002 na ndị nne na nna Spanish na obere obodo Tegueste, na Island nke Tenerife, Spain.
Pedri bụ otu n'ime ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nna ya na nne ya nke dị na 50s. Ikpe ikpe site na ihu ha, ị ga-ekwenye na nwata ahụ dị ka nne ya…?
Zute nne na nna Pedri - anya ya dịka nne na nna nna ya.
Igwe kpakpando nke Barcelona nọrọ na nwata n'ime obodo Tegueste ya na nwanne ya nwoke, onye ya na ya nwere ezigbo mmekọrịta nwanne.
N'oge ahụ, nne na nna Pedri Gonzalez ga-asọpụrụ ihe ụmụ ha nwoke chọrọ ka ha nwee ụdị uwe Barca. N'ihi ya, ụmụnna toro na-enwe mmasị na-enweghị atụ na FC Barcelona.
Nke a bụ Pedri na nwanne ya nwoke n'oge ha bụ nwata.
Ezigbo Ezinụlọ Pedri:
A mụrụ nwa amaala Tegueste n'ezinụlọ nwere ụdị ndụ ibi ndụ dabere na ịhụnanya maka FC Barcelona. Ugbu a, nke a bụ ihe na-egosi ịhụnanya ezinụlọ ya nwere maka bọọlụ.
You maara na nna nna Pedri bụ onye guzobere otu ọgbakọ na-akwado FC Barcelona n'obodo ha bụ Tegueste?
N'ịbụ onye a zụlitere n'ezinụlọ nke ụlọ agọghị agọnahụ ya ahụmịhe nke ọdịbendị bara ụba.
Ezinụlọ Pedri dị na bọlbụ na efere ndị ha na-eri nri kwa ụbọchị nwere ihe odide nke FC Barca. Nke a na-egosi njikọ miri emi ha na ụlọ ọgbakọ Catalan.
N'ụzọ na-akpali mmasị, onye Spen esighi na ala Spain ma otu n'ime 'Canary Islands', nke dị nso na Morocco na West Africa.
Ezinụlọ Pedri Gonzalez si n'obodo ahụ pụta - Tegueste nke bụ obodo ọdụ ụgbọ mmiri, na agwaetiti Tenerife.
Na-ekpe ikpe site na ala ebe mgbọrọgwụ ya, otu ma ọ bụ nne na nna Pedro nwere ike isi na Africa pụta, kpomkwem Mauritania, Morocco ma ọ bụ Algeria.
Nke na-adọrọ mmasị karị, agwaetiti Tenerife bụ ebe na-ekpo ọkụ maka ndị na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ bụ ndị nwere ọtụtụ afọ kpọtara ndị na-eto eto gaa Europe. Ihe omuma atu zuru oke Pedro Rodriguez.
Pedri Gonzalez Football Akụkọ:
Ka ọ na-eto eto na-amụ ije, nwa amaala Tenerife hụrụ onwe ya ka ọ na-eri ọtụtụ echiche egwuregwu.
N'oge ahụ, ka ya na papa ya na-akpakọrịta na okwu ịgba bọl, ọ webatara vidiyo nke Michael Laudrup. N'agbanyeghị na Pedri nwere mmasị na ya Andres Iniesta.
“Nhọrọ mbụ m na-ahọrọ bụ ANDRÉS INIESTA. M hụrụ ya n'anya na bọlbụ ya na etu ọ dị na ọnya. INIESTA NA-AKPỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ B NOTGH J Ọ B A Egwuregwu, MA Ọ B AN Nkà. ”
Dị ka ụmụaka ọ bụla, Pedri na-akụkarị n'okporo ámá nke Tegueste iji gbaa bọl na-enwe nnukwu olile anya ịghọ pro.
Ka ọ na-erule oge elekere itoolu, nwata ahụ agafeelarị ndị ọgbọ ya na usoro aghụghọ na egwu egwu.
N'oge ahụ, ezinụlọ Pedri nwere ike ịgwa ya na ọ dị kilomita ole na ole site na ịbanye ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Obi dị m ụtọ, ọ mere mgbe ya nwesịrị ule na Tegueste.
Oge Pedri na Ndụ na Football:
Mgbe ọ na-arụsi ọrụ ike na njikọ mpaghara, Pedri nwere nkụda mmụọ na enweghị ohere ịkwaga na agụmakwụkwọ ka ukwuu.
N'ezie, ihe niile yiri ka ọ na-ada, egwu ọ na-atụ ịghara ịbụ ọkachamara ghọrọ njọ.
N'oge ahụ, ọ dịghị ihe nwere ike ịkasi nwatakịrị ahụ obi n'ihi na ọ hapụrụ ebere nke chi. Nna ya nwere naanị olileanya maka onye inyeaka na-aga n'ihu mgbe nne ya na-achọ usoro kachasị mma iji nyere ya aka imeri ụdị nsogbu ahụ.
Pedri Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Karịsịa, ọ bụ ntachi obi na ndidi ya mere ka ọ kwụsie ike na football. Ka ọ na-erule oge ọ gbara afọ iri na atọ, ikpe gara nke ọma hụrụ ya ka ọ sonye na otu ndị ntorobịa Juventud Laguna - agụmakwụkwọ ka ukwuu n'obodo nna ya.
Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ kwanyeere nkà ya ùgwù ma nwee ndị scouts ndị ka na-enyocha ọganihu ya. N'ihi ọganihu ya dị ịtụnanya, ọ sonyeere òtù ndị ntorobịa nke UD Las Palmas, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na obodo kwụụrụ onwe ya nke Canary Islands.
Pedri Gonzalez Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe ọnwa ole na ole nke igwu egwu na ntọala Palmas, onye njikwa otu, Pepe Mel, hụrụ mkpa ọ dị ịnwe ya na ndị otu mbụ ọ sonyere na July 2019.
N’ọnwa mbụ nke mmalite ya, onye na-egwu egwu na-eti ihe ndekọ nke ịbụ Las Palmas bụ onye kachasị nwee goolu na 16 afọ, ọnwa 9 na 23 ụbọchị.
Site na ndị na-eme egwuregwu na-abịa, nne na nna Pedri Gonzalez malitere ịkwadebe uche ha maka ọpụpụ nwa ha nwoke na Spain.
Mgbe ọgụ na mgba banyere onye nwetara mbinye aka ya, Barcelona jidere ya na nkwekọrịta afọ ise ruru € 5 nde na mwepụta nke release 402 nde.
Na-ekpe ikpe site na arụmọrụ ya, Fans jụrụ… Pedri nwere ike ịbụ onye nzọpụta Barcelona na-achọ?
Ọ dị mma, kpee onwe gị ikpe mgbe ị lechara vidiyo vidiyo ya. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bụ Nwanyị Pedri ma ọ bụ Nwunye?
Site na ịrị elu ya, ọ ga - ejide n'aka na ụfọdụ ụmụ nwanyị ga - achọ ịbịaru ya nso.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere ike inwe usoro dị egwu maka enyi nwanyị nwere ike ịlụ ma ọ bụ ndị na-akpọ onwe ha dị ka nwunye.
dị nnọọ ka Ansu Fati, Pedri na-anata ndụmọdụ n'aka ndị mụrụ ya na mkpa ọ dị itinyekwu uche na mbọ ọrụ ya karịa ịnweta WAG.
Ka m na-ede ihe omuma ya, naanị anyị Pedro maka egwuregwu ya kama ịbụ onye enyi nwanyị (s). Ọ bụrụ na ọ ga-enwerịrị onwe ya dị ka Xavi Hernandez, Spaniard ga-agbaso ndụmọdụ nke ndị njikwa ya.
Ndụ Pedri nke Onwe:
Ozugbo ndị na-agba ụkwụ ruo ogo nke ihe ịga nke ọma, ị na-atụ anya ka ha gbanwee. Site n'iji nnukwu ego na nlebara anya, ọ ga-adịrị ha mfe ịdaba n'ọnyà nke mpako na nke ịkpọasị.
Nke mbụ, Pedri bụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ na-ebi ndụ dị umeala n'obi.
Nakwa na àgwà ya, ọ bụghị onye isi nri magburu onwe ya ma e jiri ya tụnyere nwanne ya nwoke, onye na-akwadebe nri maka ezinụlọ.
Ewezuga nri, Pedri nwere nnukwu mmasị n'ịgba egwuregwu. Jiri anya ya rie anya gị site na ilele vidiyo dị n'okpuru.
Ọ bụ ezie na ọ naghị eme mkpọtụ dị ka Sergio Ramos. Otú ọ dị, ọ nwere àgwà nke ịgwakọta ndị ọzọ na-akwado football. Ka m na-ede, ezigbo enyi ya na Barca Francisco Trincao.
Nwa okorobịa Pedri bụ onye mechara 18, n'oge itinye Bio a, enweghị ọbụna ikikere ọkwọ ụgbọ ala. Nke a bụ n'ihi na o mebeghị afọ iwu kwadoro inweta ya.
Otú ọ dị, nwa amaala Tegueste, na-ebugharị ịga njem, hapụrụ Camp Nou na tagzi.
N'otu oge, ndị na-agba bọl na-enweta ihe àmà doro anya nke ndụ ya dị umeala n'obi. Mgbe o nyeere Barcelona aka inwe mmeri, vidio vidio pụtara nke gosipụtara ịdị umeala n'obi ya.
Tupu egwuregwu ahụ, Pedri bịarute Camp Nou na uwe ya na akpa naịlọn mgbe idechara tagzi.
N'agbanyeghị na ọ dị obere Ndụ, nwatakịrị nwere nkà enwetawo ego na-agba mmiri site na nkwekọrịta ya na Barca.
Mgbe ọ na-etinye akụkọ ndụ ya, ụgwọ Pedri nke ihe ruru € 800,000 etinyewo Net ya ka ọ bụrụ € 1.1 nde.
Pedri Gonzalez Ndụ Ezinụlọ:
N’oge nsogbu ya niile, ọ dịbeghị mgbe ụfọdụ ụfọdụ ndị guzosiri ike n’akụkụ ya, ọ bụghị maka uru kama kama ọ bụ ezigbo ịhụnanya.
Nanị ọnụnọ ezinụlọ na-eme ka ịdị adị ya bụrụ ihe obi ụtọ zuru oke. N'akụkụ a, anyị ga-ekpughe ozi zuru oke banyere ha malite na nna ya.
Banyere Pedri Gonzalez Nna:
You nwetụla mgbe ị na-eche onye nwoke n’azụ ya na-anaghị ada ada ike ịghara ịda mbà bụ?
Mgbe ahụ, anyị nwere obi ụtọ ịgwa gị na nna Pedri bụ ọrụ maka mkpebi ya siri ike na-aga n'ihu n'oge ihe ịma aka nke nsogbu ndụ.
N'ihi nna ya, nwata nwoke ahụ nwere mmasị na Barcelona site na nwata.
Banyere Pedri Gonzalez nne:
N'ụzọ na-akpali mmasị, nne Pedri bụkwa onye na-ahụ n'anya football nke na-akwado Barcelona dịka ndị ezinụlọ ha.
Nnukwu mmasị na bọl emeela ka ọ mara banyere ụzọ kachasị mma isi kwado Pedri na ọrụ football ya. N'oge nsogbu, nne na-ahụkarị ga-abanye ndụmọdụ iji nyere nwa ya ndụmọdụ.
Banyere ụmụnne Pedri Gonzalez:
Iji mee ka ihe dokwuo anya, o nweghị nwanne nwanyị, mana ọ nwere nwanne nwoke. Inweghi nwanne nwoke nwanyi apụtaghị na Pedri ga-eme efere.
N'eziokwu, nwanne ya nwoke na-arụ ọrụ nwanne nwanyị site na isi nri.
Banyere ndị Pedri Gonzalez:
Anya zuru ezu n'ime ezinụlọ Ezinụlọ ya na-egosi na nna nna ya nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na football.
Dika nne na nna ya, Pedri Gonzalez nna nna na-akwado FC Barcelona - ihe ngosi nke huru ya ike Penya Barcelonista de Tenerife-Tegueste (otu ndi na-akwado Barca).
Ikekwe Bio nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ obere ọdịnala ma ọ bụrụ na ndị nne na nna ya, nwanne nne ya na ụmụ nwanne nna ya akwadoghị Barcelona.
Pedri Gonzalez Eziokwu:
Iji chịkọta akụkọ ndụ Spaniard, lee ụfọdụ ihe ga - enyere gị aka ị nweta nghọta zuru oke banyere ihe ncheta ya.
Eziokwu nke 1: Naanị Ronald Koeman bụ Legacy:
Imirikiti ndị mgbasa ozi nwere echiche nke ahụ Pedri bụ ihe nketa ikpeazụ ikpeazụ Barcelona hapụrụ n'oge gara aga.
N'agbanyeghị Ronald Koeman duru Barca site na ọchịchị nchịkwa na-adịghị mma, o nyekwara ụlọ ọrụ ahụ aka inweta Pedri bụ onye gosipụtara ọgụgụ isi na football.
Eziokwu nke 2: Ezigbo ọghọm nke Real Madrid:
N'etiti snow snow nke mmalite 2018, Pedri nwere ule na Real Madrid nke jedebere ubu oyi.
O di nwute, ule otu izu ya wetara mmechuihu dika Los Blancos lere ya anya "Ọ bụghị ruo ogo ha."
Mgbe afọ dị mma na afọ sochirinụ, Madrid bịara rịọ maka mbinye aka ya na Barca. N'ezie, ọ jụrụ onyinye ahụ wee sonyere ndị Catalan.
N'ụzọ na-emegide onwe ya, Pedri kelere Madrid maka ịbịanyeghị ya aka n'ihi na ọ banyere na klọb nke nrọ ya.
Eziokwu nke 3: Rygwọ ọnwa na-akwụ ụgwọ na sekọnd:
enwetakwa na Euro (€)
Kwa afọ € 861,976
kwa ọnwa € 71,831
Kwa Izu € 16,551
Kwa .bọchị € 2,364
Kwa elekere € 99
Kwa Nkeji € 1.6
Kwa nke abụọ € 0.03
Anyị emeela atụmatụ nke ọma nyocha nke ụgwọ Pedri Gonzalez dị ka elekere na-akụ. Chọpụta n’onwe gị ego ole onye Spen ritere kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Pedri Gonzalez's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
You maara? .. na Spain, nwa amaala ọ bụla ga-arụ ọrụ maka afọ 26 na ọnwa 6 iji nweta ụgwọ ọnwa Pedri kwa afọ €861,976.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ kwenyere na àgwà ya yiri ka ọ dị nso Frankie de Jong, Pedri ka nwere ọrụ dị ogologo ọ ga-aga.
Ka o sina dị, ogo ya nwere nke 88 meriri nke ahụ Pablo Fornals na ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ na Spain.
Eziokwu nke 5: Religion:
Mgbe a mụrụ ya, nne na nna Pedri Gonzalez mere ka ọ kpọọ aha 'Pedro' nke bụ aha Galician maka Peter.
Nke a pụtara na a mụrụ Pedri ma tolite n'ezinụlọ Ndị Kraịst. Anyị amabeghị ọkwa ọkwa ya maka okpukpe ndị Kraịst.
N'oge anyị na-agụ Bio ya, anyị ghọtara ihe - na Pedri bụ onye nrọ nke rụsiri ọrụ ike ime ka nrọ ya dị irè. Obi dị m ụtọ, ọ ka na-akwado nkwado nke ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya ndị kwụ ya n'akụkụ na nsogbu.
Pedri ga-enwe obi ụtọ oge niile ya na nna ya nọrọ na tagzi mgbe ọ na-aga ọzụzụ. N'ezie, nri dị ụtọ nke nne ya na nwanne ya nwoke ga-ahapụ ya ka ọ dịkwa na ya.
N'ikpeazụ, Lifebogger kwuru daalụ! - maka iwepụta oge gị na ịgbanye Biography nke Pedri Gonzalez. Anyị na-agbasi mbọ ike ime ka ị nwee mmasị ịmata ihe na akụkọ ụmụaka nke ndị na-agba ọsọ ụkwụ.
Jiri obiọma mee ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị mma n'isiokwu ahụ. Ma ọ bụghị ya, kọọrọ gị echiche gị gbasara akụkọ ndụ Pedri na ngalaba nkọwa. Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke ihe ncheta ya, jiri tebụl anyị wiki.
Aha n'uju: Pedro Gonzalez Lopez
aha otutu: Pedri
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 25 nke ọnwa Nọvemba, 2002.
Age: Afọ 18 na ọnwa 8
Ebe amụrụ onye: Nkuzi na agwaetiti nke Tenerife, Spain
Ebe ezinụlọ si: Tegueste, Tenerife (na Santa Cruz de Tenerife mpaghara).
Rygwọ ọnwa kwa afọ: 861,976 (Ọnụọgụ 2020)
Ezigbo Net: € 1.1 nde
Ihe omume: Na-egwu egwuregwu vidio.
Ogo na igwe elekere 1.75 m.
Ogo na etkwụ na Inches 5 ụkwụ na 9 sentimita asatọ.